I-RedNotebook: Isifundo Sokusetshenziswa Kusuka kuLinux
I-RedNotebook: Isifundo Sokusetshenziswa.
I-Pavloco | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Njengoba kuthenjisiwe, nansi isifundo sokusebenzisa le magazini yomthombo ovulekile nethuluzi lebhulogi le-Linux.
3 Umugqa Omusha Nezigaba
5 Okugqamile, Italic, Ukudwebela kanye ne-Strikethrough
6 Dala Uhlu
8 Faka Izixhumanisi Nezithombe.
Ukuqala, kufanele kucaciswe ukuthi kunezinhlobo ezimbili zokubuka kuRedNotebook:
Imodi "Yokuhlela": Okufakiwe kudalwe ngale modi. Zibhalwe ngombhalo osobala, okungukuthi, okuningi kwalokho okubhala lapha ngeke kube nohlobo oluthile lwefomethi. (Bheka isithombe ngezansi)
Imodi "yokubuka kuqala": Ngithanda ukuyibiza ngokuthi "Imodi Yokufunda" ngoba kulapho sifinyelela khona kulokho esikubhalile, kepha sesivele sikufomethi esiyabela yona ngokusebenzisa izimpawu ezithile ezisetshenziswe ku-Hlela Mode. (Bheka isithombe esikhulu)
Singakwazi ukuhlangana phakathi kokubuka kokuHlela nokubuka kuqala ngokusebenzisa inkinobho yemenyu, noma ngomyalo Ctrl + P
Nakhu kuza into ethokozisayo nokuthi ingethusa abanye abasebenzisi ngenxa "yobunzima" bayo, kepha ngikweluleka ukuthi ungadikibali, kulula uma ukujwayela.
Ukulandela okokufundisa ungabona izithombe ezimbili eziyizibonelo, ezihambelana, eyokuqala ingumphumela wokugcina, owesibili ngumbhalo okumodi yokuhlela.
Ukwabela ifomethi, faka imodi yokuhlela. Lapho udala umbhalo uzobona (ikakhulukazi uma umude) ukuthi uma uya kumodi yesikrini umbhalo ubonakala untula ngokuphelele kwifomu, ngaphandle kokuhlukaniswa kolayini noma izigaba. Ngakho-ke lapho udala ukungena kwephephabhuku, gcina amathiphu alandelayo engqondweni.
Umugqa Omusha Nezigaba
Njengoba uzobona, ukwenza ifayili le- ukuhlukana komugqa embhalweni wakho kumodi yomhleli, awubonakali kumphumela kumodi yokubuka kuqala. Ukufeza lokhu ekugcineni kolayini ngamunye kufanele ungeze u - "\_\_" bese uqhubeka kulayini olandelayo olandelayo.
Ukwakha a isigaba esisha, kubalulekile ukushiya umugqa ongenalutho.
Ukwengeza umugqa wokwahlukanisa engeza izimpawu ezingamashumi amabili ezilinganayo ngokulandelana (====================)
para faka isihloko unezinketho ezimbili. Enye ukuya kwimenyu ethi Faka / Isihloko. Enye inketho ukukwenza ngesandla, ngokungeza uphawu olulinganayo (=) ekuqaleni nasekupheleni komugqa ofuna ukuwunikeza njengesihloko.
Inzuzo yangempela yokwenza ngesandla ukuthi ungabela ileveli yesihloko, okungukuthi, dala izihloko, imibhalo engezansi, imibhalo engezansi, njll. Njengoba uma ungeza izimpawu ezimbili ezilinganayo (==) udala isihlokwana, esinezimpawu ezintathu (===) isihlokwana nokunye nokunye (njengoba kusho u-El Chavo del 8).
Okugqamile, Italic, Ukudwebela kanye ne-Strikethrough
Ukufeza lokhu futhi, unenketho yemidwebo noma usebenzisa izimpawu.
Ukufaka umbhalo ku ngesibindiIsibonelo, sebenzisa i-asterisk ephindwe kabili (**) ngaphambi nangemva kwegama noma umugqa ofuna ukugqamisa. Ngokufanayo ukwabela Omalukeke sebenzisa slash kabili (//), ukuze dwebela underscore ephindwe kabili (__) ne- for Khansela udwi ophindwe kabili (-).
Ukwakha uhlu unenketho yesithombe kwimenyu Faka / Uhlu Lwezinhlamvu. Kulokhu, inzuzo yemodi yesandla ukuthi unganquma ukuthi ngabe uhlu lwakho lisebenzisa amaphuzu enhlamvu noma izinombolo.
La iphuzu lenhlamvu unikezwe ngokubeka udwi (-) ngaphambi komugqa, ngenkathi inombolo kunikezwa uphawu lokuhlanganisa (+).
Ukwakha amazinga ezinhlwini (kuphela ngezinhlamvu), shiya izikhala ezimbili ngaphambi kwekhonco ukuze wakhe into esezingeni lesibili, izikhala ezine zento esezingeni lesithathu, njll.
Amalebula abelwe uphawu lwe- iphawundi (#). Eposini lokugcina, kuphawulwe okuthile ngobunzima obudalwe ukuthi kungadalwa inothi elilodwa kuphela ngosuku. Mina uqobo ngibhekane nalesi simo ngisebenzisa amalebula. Isibonelo, uma isihloko noma inothi lihlobene nomsebenzi wami, ngisebenzisa i-hashtag #Dispatch. Ngakho-ke kufanele ngisebenzise kuphela ibha yokusesha ukuthola ilebula le-Dispatch futhi uma inothi belisendabeni ekhethekile ngisebenzisa nelebuli yaleso sihloko. Ukwengeza kulokhu ukuthi amanothi achazwa ngosuku, empeleni "ngikwenze kahle."
Faka Izixhumanisi Nezithombe.
I-RedNotebook futhi ikuvumela ukuthi ungeze izithombe kokuthunyelwe kwakho, noma izixhumanisi zamafayela asendaweni noma amakhasi we-inthanethi. Ukuze usebenzise le misebenzi ngincoma ngokuphelele imodi yokuqhafaza yefayela le- Faka imenyu. Ilula kakhulu futhi umphumela uyesabeka.
Isifundo sami ekusebenziseni iRedNotebook sigcina lapha. Kukhona ezinye izinketho ezisezingeni eliphakeme engizokhuluma ngazo ngesinye isikhathi.
Sengathi ungaqhubeka ube nempelasonto enhle kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-RedNotebook: Isifundo Sokusetshenziswa.
Ngibonile amapasta analolu hlobo lwefomethi.
Ngibona ubunzima obukhulu be-logbook noma idayari.
Iziphi izinzuzo esinazo uma kuqhathaniswa neprosesa yamagama yaseLibya efana ne-AbiWord?
Ngokuyinhloko, ukuthi inekhalenda nenjini yokusesha phakathi kwezinye izimfanelo. Ngincoma ingxenye yokuqala ye-athikili.
Ozithobayo nokubonga ngokuphawula.
Ngiyaxolisa uma uphazamise ukuphawula, bengingazi ngokuphelele ngohlelo.
Ukubingelela nokubonga ngolwazi.
Kuhle kakhulu, elinye icebo, uma kulayini wokuqala sishiya ukuhlehlisa ngethebhu kunikeza umphumela omuhle esigabeni esingasetshenziswa ukwenza uhlu noma okuthile okunjalo.
Ngabe kukhona okungahle kwenzeke ukuvimbela uhlelo ukuthi lunqamule amagama noma imishwana eboshwe ngama-hyphen amabili? Ngisebenzisa ideshi ephindwe kabili kakhulu ngoba iLibreoffice iyishintsha ngokuzenzakalela iye kudeshi elide futhi angifuni ukweqa amagama. Ngakolunye uhlangothi, angidwebeli noma ngisebenzise okugqamile futhi cishe angikaze ngibe nomalukeke. Ingabe ikhona indlela yokususa lezo zinketho ezisetshenziswa ngokuzenzekelayo?
Ungayakha kanjani "indawo yokubuyisela" ngeClonezilla
I-Master Master DNS ye-LAN ku-Debian 6.0 (V) neyokugcina